Headline Nepal | विश्वमा स्वास्थ्य युद्ध फैलाउने चीनले परिणामको दायित्व बहन गरेको छ त ?
विश्वमा स्वास्थ्य युद्ध फैलाउने चीनले परिणामको दायित्व बहन गरेको छ त ?
८ जेठ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) अहिले एक ठुलो विश्व युद्ध जस्तै भैरहेको छ ।
सन् २०२० देखि हाम्रो जीवन र जीवन शैलीमा कोरोनाले व्यापक परिवर्तन ल्याइदिएको छ । यस महामारीले मुख्य गरि आर्थिक र सामाजिक पक्षलाई निकै प्रभावित बनाइ रहेको छ ।
विभिन्न प्रारम्भिक अनुसन्धानहरुले देखाए अनुसार मानिसहरु मानसिक रुपमा विछिप्त छन् । समाजमा अपराध बढेका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका घटना झनै बढेका छन् । बेरोजगारी बढेको छ । घरेलु हिंसाको ग्राफ यस समयमा अझै बढेको छ । अवस्था यहाँसम्म विग्रेको छ की, विश्वका हरेक समाजमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढिरहेको छ ।
विश्वलाई नै यस्तो आतङ्कित पार्ने खतरनाक भाइरस नेपाल, भारत, जापान वा ब्राजिल जस्ता कुनै देशबाट विश्वमा फैलिएको भए वा यसले विश्वव्यापी रुपमा विघटनकारी महामारी सिर्जना गरेको भए यो विषय आज अन्तर्राष्ट्रिय ‘ड्रग हाउस’को रुपमा लिइने थियो ।
तर चीनले यस भाइरसले विश्वमा फैलाएको त्राही–त्राहीको जिम्मेवार आफु भएको मनन गर्नु त कहाँ हो कहाँ उल्टै यस विषयमा मुख खोल्न सक्ने मान्छेहरुको आवाजलाई नै विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर बन्द गर्ने कोसिस गर्दै आएको छ ।
चीनले हाम्रो महत्वपुर्ण समय र स्वास्थ्यको बर्वादी गरेको मात्र छैन उसले त कोरोना उत्पत्तिको र यस बारे थप अध्ययनको पक्षलाई समेत स्वतन्त्ररुपमा चल्न दिएको छैन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा उसले स्वतन्त्र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्दै आएको छ ।
वास्तवमा चीनले भाइरसले पीडितको शोषण गरी ठूलो आर्थिक लाभ उठाएको छ ।
महामारीको समयमा उसको अर्थव्यवस्था फस्टाएको मात्र छैन, औषधिदेखि अन्य स्वास्थ्य समाग्री निर्यातमा पनि उच्च रेकर्ड राखेको छ । अझै भन्नु पर्दा कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिति नाजुक भैरहेका बेला चीनले यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेको छ । चीनको यस्तो किसिमको गतिविधिले कोरोना महामारी चीनको एक अर्थ राजनीतिको ठुलो हिस्सा भएको प्रष्ट हुन्छ ।
अनौठो तथ्यलाई विचार गर्नुहोस त अन्य मुलुकले महामारीको भयानक विनाश भोगिरहेका बेला यस भाइरसको जन्म दिने देश करिब क्षेति मुक्त जस्तो देखिन्छ । महामारीले सबैभन्दा कम प्रभावित देशको रूपमा चीनले नै स्थान ओगटेको छ । जापान र दक्षिण कोरियादेखि नेपाल र भारत सम्मको छिमेकी मुलुकहरूमा पनि चीनले कोरोना वृद्धि गरेको छ । तर, उसले आफ्नो सीमाना भित्र रहेको भाइरसलाई कसरी निष्किृय पारिरहेको छ र अन्य देशलाई दलदलमा पारेको छ भन्ने अझै रहस्य नै छ ।
भाइरसको उत्पत्ति बारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धेरै कोसिस त भए अध्ययनकालागि । तर चीनसँग कुनै देशले बोल्न सकेका छैनन् । उसले शक्तिको आडमा विश्वमा महामारी फैलाएर यसको फाइदा लिदै सर्वशक्तिमान बन्ने कसरत जारी राखेको सबैले बुझेका छन् तर एक वर्ष भैसक्दापनि कसैले पनि चीनलाई क्षतिको लागि मुद्दा हाल्ने सुझाव दिएका छैनन्, किनभने यस्तो कार्यले चीन रुष्ट हुन्छ र थप जटिलता आउने डर छ सबैमा ।
हुनत चीनले आफ्नो प्रतिष्ठा र इमेज विश्व जगतमा जोगाउन अथाह लागत खर्च गरिरहेको छ । तर बाहिरी आवरणमा त्यस्तो देखिएपनि आन्तरिक रुपमा उसका सबै कदम अहिलेपनि कोरोनाबाट आफुसँग प्रतिशप्रर्धि सबैलाई सिद्याउने नै हो । उसले बमबारुद्ध नभई भाइरसद्धारा विश्वमा स्वास्थ्य युद्ध मच्चाएको छ । - ब्रह्मा चेल्लानी